100 Minamato Pfungwa Pamusoro pekutadza uye Kuora Mwoyo | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 100 Pfungwa dzeMunamato Kupesana nekutadza uye Kuodzwa mwoyo
100 Pfungwa dzeMunamato Kupesana nekutadza uye Kuodzwa mwoyo
13 Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu unondisimbisa.
Kunyangwe zvinetso zvinouya nenzira yako semuKristu, iwe zvechokwadi unozokunda. Izwi raMwari rinoti, iwe uchave musoro chete kwete muswe, iro ishoko raMwari pamusoro pako nhasi nekusingaperi. Isu takanyora zana emunamato mapikisheni kukanganisa uye kuora mwoyo. Kukundikana hakusi kuguma kwehupenyu hwako, kushungurudzika hakusi kupera kwemugwagwa, iwo ese ari zvikamu zvezvipupuriro zvako. Mwana wega wega Mwari chinangwa chake kubva kuumambo hwa rima, Satani anogara achirwira iwe kuti akuwisire pasi, asi iwe haufanire kukanda mapfumo pasi, unofanirwa kuve nekutenda kwakaomarara uye usatore "kwete" mhinduro. Kuti iwe ubude hofori, unofanirwa kusimuka uye kuramba kutadza uye kuora moyo nesimba remunamato.
Ini handizive kuti ungave urikukundikana nhasi, handizive kuti ungave uri kusangana nekuodzwa mwoyo nhasi, ndinoda kukuzivisa iwe kuti hausi kumbokundikana kusvikira iwe wakanda mapfumo pasi. Iwe haugone kupedzisira wakundikana mumutambo wehupenyu kusvikira warega kutamba. Kukundikana chingori chiitiko, zvichaitika, saka usachirega chichikuremedza. Bhaibheri rinoti munhu akarurama anodonha kanomwe asi anomukazve Zvirevo 24:16. Hapana chakaipa kukundikana kana kudonha, asi chimwe chinhu chakakanganisika kana iwe ukaramba kusimukazve kana iwe ukakanda mapfumo pasi. Munamato uyu unonongedzera pakurwisa kukundikana uye kuora mwoyo kunozokupa nemweya wekutenda uye kutsungirira paunenge uchimhanya nhangemutange yehupenyu hwako nehupenyu hwako. Paunenge uchinamata izvi zvekunamatira, mweya mutsvene uchasimbisa kutenda kwako uye nekukubatsira iwe kukunda masimba erima ari kuyedza kukuwisira pasi.
Iyi ndiyo yako kutanga kutanga, Ndinoona Mwari vachikupa humbowo hwekutendeuka paunenge uchiita manamato emunamato uyu. Sezvaunosimuka kubva mukutadza kwako uye zvaunokanganisa uye uchidana kuna Mwari nhasi, ndiri kumuona achisimudza kubva muguruva uye achikonzera kuti ufare naMambo nemahara epasi. Hauzokundikani muhupenyu, iwe unokwanisa kuzviita, ingotenda muna Mwari uye zvakare tenda mukati mako uye Mwari wezvipupuro achakupa ufakazi hwakakomba muzita raJesu. Ndokuona kumusoro.
1. Rega kufungidzira kwekutadza uye kushungurudzika kwandiri pamusoro pekusvava kubva kune kwakaburitswa, muzita raJesu.
2. Vanondiseka vachinyomba vachanyadziswa mukukudzwa kwangu muzita raJesu.
3. Rega hurongwa hwekuparadza hwevavengi hwakanangana neni huputire muzviso zvavo, muzita raJesu.
4. Rega pfungwa yangu yekuseka ishandurwe kuve tsime rekusimudzira, muzita raJesu.
5. masimba ese anotsigira mabasa akaipa pamusoro pangu ngaanyadziswe, muzita raJesu.
6. Rega murume akasindimara ane simba rakakumikidzwa kuzorwa neni awire pasi ave musimba, muzita raJesu.
7. Regai nhare yeavo vese vanoita zvakaipa vanondirwisa iputswe zvidimbu, muzita raJesu.
8. Wese munhu anonyepera, muuki, kana muuki wezvemashure kwekutadza nekuparadzaniswa kwehupenyu hwangu, ngaabviswe pasi uye anyadziswe izvozvi !!! muzita raJesu.
9. Wese munhu akaipa wezano anotadzisa kufambira mberi kwangu agamuchire matombo emoto, muzita raJesu.
10. Rega mweya yeEjipitesi iri kundidenha iwire pasi pekurayira kwaFarao, muzita raJesu.
11. Wese munhu akasimba kubva pandanga ndichironga kuwa kwangu ngaanyadziswe, muzita raJesu.
12. Munhu wese akaipa ngaazvirumbidze pamusoro pangu ngaagamuchire mabwe emoto, muzita raJesu.
13. Rega mweya yemadhimoni yeudzvinyiriri ichanditeera iwire muGungwa Dzvuku rekwavo, muzita raJesu.
14. Rega zvese mananipu anovavarira kudzosera humwari hwangu ngazvishungurudzwe, muzita raJesu.
15. Rega vaparadzi vese vekuparadzwa kwekunaka kwangu ngavanyaradzwe, muzita raJesu.
16. Rega mabhegi ose anokwezva uye muhomwe zisungwe, muzita raJesu.
17. Meso ose akashata akatarisana neni ngaagamuchire upofu, muzita raJesu.
18. Rega zvakaipa zvese zvechiitiko zvinoshamisa zvibviswe kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
19. Rega makomborero angu ose atorerwe nemweya yeuroyi asunungurwe, muzita raJesu.
20. Rega makomborero angu ose atorerwe nemweya inozivikanwa isunungurwe, muzita raJesu.
21. Rega makomborero angu ose atorwe nemidzimu yemadzitateguru asunungurwe, muzita raJesu.
22. Rega makomborero angu ose atorwe nevavengi vane godo ngaasunungurwe, muzita raJesu.
23. Rega makomborero angu ose atorerwe nevasatani masunungurwe, muzita raJesu.
24. Rega makomborero angu ose atorerwe nehumambo asunungurwe, muzita raJesu.
25. Rega makomborero angu ose atorerwe nevatongi verima vasunungurwe, muzita raJesu.
26. Rega makomborero angu ose atorerwe nemasimba akashata asunungurwe, muzita raJesu.
27. Rega makomborero angu ose atorwe neuipi hwomweya munzvimbo dzekudenga ngatisunungurwe, muzita raJesu.
28. Ini ndinoraira mashandiro ese emadhimoni akafungidzirwa kukanganisa ini kufambira mberi kuti vadzwe, muzita raJesu.
29. Chero hope dzakashata dzakaitwa kuti dzindikuvadze dzinofanira kushandurwa kurara kufa, muzita raJesu.
30. Tora zvombo zvese nemidziyo yevanodzvinyirira nevatambudzi ngavapiwe simba, muzita raJesu.
31. Rega moto waMwari uparadze simba rinoshanda chero chombo chekunamata chinoshanda kwandiri, muzita raJesu.
32. Rega zano rakaipa rakapihwa kupokana nekuda kwangu riparuke uye riparadzike, muzita raJesu.
33. Rega vese vanodya nyama uye vanonwa ropa, vagumburwe uye vadonhe, muzita raJesu.
34. Ini ndinoraira vanodzingana nemweya kuti vatevere ivo, muzita raJesu.
35. Rega mhepo, zuva nemwedzi zvimhanye zvinopesana nekuvapo kwese kwemadhimoni munzvimbo yangu, muzita raJesu.
36. Imi vadhakwa, nyangarikai pabasa rangu, muzita raJesu.
37. Rega muti wese wakadyarwa nekutya muhupenyu hwangu uome kumidzi, muzita raJesu.
38. Ndinodzima huroyi hwese, kutuka uye zvipenga zvinopesana neni, muzita raJesu.
39. Tora tese-senge kutukwa ngavaphule, muzita raJesu.
40. Rega rwiyo rweMoto rwemoto runatse chero rurimi rune zvakaipa kwandiri, muzita raJesu.
41. Ini ndinoparidza kuti ini ndichabudirira muhupenyu muzita raJesu
42. Muvengi wese wechiitiko changu anonzi anoshaya simba nekusingaperi muzita raJesu
43. Hakuna chombo chakagadzirirwa kundiita chakundikana chinobudirira muzita raJesu
44. Ndichakwira kumusoro kwevavengi vangu vese muzita raJesu.
45. Ini ndinoparidza kuti vese vanondida vanowira pasi nekuda kwangu muzita raJesu
46. ​​Ini ndinoparidza kuti vese vakagara pane yangu kufambira mberi ngavazivikanwe muzita raJesu
47. Chero gomba rekutadza nekuodza moyo rakandichengetera, vanochera vese vanozovigwa mukati muzita raJesu
48. Ini ndinoparidza kuti ndinomira mushe muzita raJesu
49. Ini ndinozivisa kuti ini ndakanyanya kuwanda kuna Dhiabhori muzita raJesu
50. Ini ndinozivisa kuti Ini ndine simba pamusoro pemasimba kana rima richizama kundiburutsa pasi ini Jesu zita
51. Ini ndinozivisa kuti mweya wekusimuka hauna simba pamusoro pangu muzita raJesu.
52. Chero satanic chepfu yakanangiswa pandiri haichinei neni muzita raJesu
53. Ndinosimuka pamusoro pekukundikana muzita raJesu
54. Ndinosimuka pamusoro pekunyadziswa muzita raJesu
55. Ini ndinosimuka pamusoro pezvimisikidzwa muzita raJesu
56. Ndinosimuka pamusoro pekusagadzikana muzita raJesu
57. Ndinosimuka pamusoro pekunyadziswa muzita raJesu
58. ndinosimuka pamusoro pevadzivisi vangu muzita raJesu
59. Ndinosimuka pamusoro pemamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu muzita raJesu
60. Ndinosimuka kupfuura vavengi vangu vese muzita raJesu.
61. Ini ndinosimuka pamusoro pemurume wese akasimba madhimoni muzita raJesu
62. Ini ndinosimuka pamusoro pevaroyi nevaroyi muzita raJesu
63. Ndinosimuka pamusoro pemweya inozivikanwa muzita raJesu
64. Ndinosimuka pamusoro pemasimba emugungwa muzita raJesu
65. Ndinosimuka pamusoro pesimba rezvivi nemuzita raJesu
66. Ini ndinosimuka pamusoro pemadzitateguru emasimba muzita raJesu
67. Ndinosimuka pamusoro pemadzitateguru emadzitateguru mune zita raJesu
68. Ini ndinosimuka pamusoro pevabereki kugumira muzita raJesu
69. Ini ndinosimuka pamusoro pezvakatipomhapo mune zita raJesu
70. Ini ndinosimuka pamusoro pemagariro munzvimbo dzaJesu
71. Hasha dzaMwari ngadzive pamusoro pese muvengi wehupenyu hwangu, muzita raJesu.
72. Rega ndizadziswe nokuzara kuzere kwaMwari, muzita raJesu.
73. Ini ndinopa kushopera kwese nekukara kwegehena kunopesana nehupenyu hwangu husina simba, muzita raJesu.
74. Ini ndinodzivisa dutu renyika kubva kunetsa nzvimbo yangu yekugara, muzita raJesu.
75. Rega manyepo ekupomera mhosva nekundipomera arege pasi uye afe, muzita raJesu.
76. Ngapave chifukidziro chemwari chembiri yaMwari pandiri, muzita raJesu.
77. Ishe, meso esimba rangu ngavhenekeswe, muzita raJesu.
78. Ini ndinotema zvese hosha dzeIjipita kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
79. Tanga kuraira matambudziko ese kuti aende, muzita raJesu.
80. O Ishe, zvakakwana izvo zviri kushomeka muhupenyu hwangu muzita raJesu.
81. Ini ndinodzora mutemo wese wa satanic wakapihwa kupesana nekusimudzirwa kwangu, muzita raJesu.
82. Ini ndinonyaradza imbwa dzose dzakaipa dzichihukura kupesana nekubuda kwangu, muzita raJesu.
83. Regedza chigunwe chaMwari chisafukidze imba yangu yakasimba, muzita raJesu.
84. Shiri dzose dzakaipa dzichibhururuka nekuda kwangu, ibatwe, muzita raJesu.
85.Mumiriri wega wega wekunyadzisa, kusimuka kumashure uye kunyadziswa, ndisunungure, muzita rakasimba raJesu.
86. Ndinoputsa zvigaro zvese zvakashata zvakaiswa zvinopesana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
87.Mumiriri wese wekushushikana muhupenyu hwangu, ndiparadzirwe dongo, muzita raJesu.
88. Simba rega roga rinokuchidzira matambudziko angu, wira pasi ufe, muzita raJesu.
89. Ini ndinozvisunungura kubva pane chero kutuka kunoshanda mumhuri yangu, muzita raJesu.
90. Hondo yega yega yemweya yakapihwa kwandiri kuti idye nyama yayo, muzita raJesu.
91. Ndinotsika pamusoro penyoka nezvinyavada, muzita raJesu.
92. Chero muchengeti wakavanzika mudzi une dambudziko, unomisikidzwa muzita raJesu.
93. Ini ndinonyadzisa huchenjeri hwese hwakaipa hunoshanda zvinopesana nezvangu, muzita raJesu.
94. Nesimba roMweya Wakachena, ndinopwanya vavengi vangu vese, muzita raJesu.
95. Nesimba roMweya Wakachena, ndakaisa zvakaipa zvese pasi petsoka dzangu, muzita raJesu.
96. Ishe, regai ndive anoshamisa muzita raJesu
97.Mweya Mutsvene, isa zvishamiso zvako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
98. Ishe Jesu, pwanyai hutera hwangu uye paradzai chirwere changu.
99.Ishe Jesu, paradza nheyo dzasatani uye undivake pashoko Rako.
100. Ishe Jesu, ndiise kupisa neMweya Wako.
Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu
Previous nyaya20 Hondo dzeMweya Minamato yeMatambudziko Emuchato
inoteveraMaminitsi makumi matatu Emunamato Kune Vacheche Mune Womb
Nyangu Annie Mbudzi 4, 2020 At 9:56 am
Ameni naAmeni! Zvine simba
Nyangu Annie Mbudzi 4, 2020 At 9:57 am
Mwari vakuropafadze muzita raJesu
Solomon Murphy Chivabvu 3, 2021 Na8: 39 am
Ameni uye Ameni
Minyengetero Yenzvimbo yechiKristu
30 minamato yekuregerera uye kutungamira
20 akanakisa mavhesi eBhaibheri nezve zvishamiso nhasi